Bacishe basibulala isangoma ebesiqola | IOL Isolezwe
Bacishe basibulala isangoma ebesiqola
Isolezwe / 22 September 2011, 12:02pm /
Isangoma uNkk Bashongani Makhanya esisizwe ngamaphoyisa befuna ukusidla basifele abantu abebekhala ngokuthi besibaqola.	Isithombe: PATRICK MTOLO
UNKSZ Buyisile Ndlovu (26) ongomunye wabaqolwe nguNkk Bashongani Makhanya ozenza inyanga. ISITHOMBE: PATRICK MTOLO
INYANGA uNkk uBashongani Makhanya ephume ngesamagundane nemithwalo yayo ngesikhathi umphakathi awseMkhazini, eMbumbulu usho ukuyibamba ngezandla. ISITHOMBE: PATRICK MTOLO
UPHUME eseqashwe ngamaphoyisa owesifazane oyisangoma abantu baseMkhazini ngase-Adams Mission befuna ukumudla luhlaza emuva kokuba bethole ukuthi ubebaqola ebasabisa ngezinto ezimbi ezizokwenzeka kubo afune imali eshisiwe kubo.
Ithimba leSolezwe lifike kule ndawo izolo uNkk Bashongani Makhanya (59) waseMolweni amalungu omphakathi abebhodla umlilo eseke athi ukumtitinya.
Izijumbana zezimpahla zakhe okubalwa kuzo izimpahla zokugqoka, imithi, izikhumba nemiyeko ayifaka ekhanda uma “elapha” bese iphonswe emgwaqeni.
UNksz Dudu Ndlovu, obecuphise lesi sangoma athi safika ngokuvakasha sajika sangabe sisayingena eyokugoduka, uthe uqale ukuba nezinsolo ngemikhuba yaso emuva kokuthi simtshele ngezinkinga zikadadewabo omncane nendodakazi yakhe endala ezifana ncamashi.
Uthe okumxakile nokumphaphamisile mayelana nokuwakwa yisangoma wukuvela kwezinkinga ezifanayo ebezidinga ukuthi badle amagobongo ukuze bagweme ukufa singakafiki isikhathi sabo.
“Ukuba nezinkinga ezifanayo kwami, indodakazi yami, udadewethu nomakhelwane ojwayele ukusivakashela ekhaya yisona sizathu esenze ukuthi ngivule amehlo ngalo mama. Ubengumpetha impela ekusikhohliseni ngoba ubevele asho into ethusayo neyenza ukuthi sizame ukuthola imali ngokushesha ukuze kusizakale abanenkinga endlini,” kusho uNksz Ndlovu.
Eqhuba uthe yize akhokha u-R1 000 wokuvula isikhwama sokudla amagobongo ubesazokhokhiswa enye imali njengoba ebesaqongelela u-R8 000 wokuphothula amagobongo. Uthe lo mkhuba owenziwa yilo mama umphoqe ukuthi amxoshe njengoba ecishe wamxabanisa nabantu bakule ndawo nabo abesebaqedile.
Ngesikhathi uNksz Ndlovu echaza ngalolu daba abantu bebesho ukusibamba ngezandla isangoma, silokhu sibuza ezintathelini ukuthi senzeni.
Isangoma besibukeka sengathi sihanjelwe wumqondo ngesikhathi singungwe ngamalungu omphakathi. besizwakala sishwashwatha.
UNksz Buyisile Ndlovu (26), omunye obedla amagobongo kulesi sangoma, uthe waluthwa wukuzwa elokuthi uzofa uma engayilandeli imigudu yokudla amagobongo.
“Lo mama udlale ngesikhathi sami ngigquma, ngiphalaza, ngilokhu ngihleli endlini amasonto amathathu kanti ngimosha isikhathi sami,” kusho uNksz Ndlovu.
USimphiwe Makhanya, oyindodana yalesi sangoma, ongafunanga ukwanda ngamazwi ngesikhathi ethintwa ngocingo, uthe ngeke akwazi ukuphawula ngalolu daba ngoba naye unemibuzo engaphenduleki ngezinto ezenziwa unina ongazwani nokuhlala ekhaya.
Amaphoyisa aseFolweni abekule ndawo agcine esithathile isangoma esisusa olakeni lomphakathi.